Marina - Voafetra ny AOOD Technology
Ny fampiharana an-dranomasina dia mitaky fepetra faratampon'ny slip ring noho ny tontolo iainana an-dranomasina mahery. Ny traikefa ananan'i AOOD amin'ny tetik'asa an-dranomasina sy ny fanavaozana maharitra dia manome toky fa ny peratra kapaoty AOOD dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa mitombo. Ny peratra kapaoty AOOD dia manatanteraka ny asany amin'ny fiara anaty rano, ny rafitra antena satelika an-dranomasina, ny winches an-dranomasina, ny fitaovana sonar, ny fitaovana fitadiavana seismika ary ny ranomasina.
Fiara miasa lavitra (ROV) sy rafi-pifandraisana zanabolana amin'ny maha-mpampiasa farany manan-danja ny peratra slip amin'ny fampiharana an-dranomasina izay sehatry ny fampandrosoana hatrany AOOD. Ny fitomboan'ny fampiasana robots anaty rano ho an'ny indostrian'ny solika sy entona anaty rano dia mampiroborobo ny rafitry ny ringan'ny slip ROV. Ny peratra slip izay ampiasaina amin'ny rano lalina dia tsy maintsy mahatohitra ny tontolo anaty rano lalina toy ny tsindry sy ny hatairana ary ny harafesina. AOOD dia nanolotra peratra slip ho an'arivony ho an'ny ROV, ao anatin'izany ny kavina tokana na fantsom-pifandraisana elektrika-optika fantsom-pifandraisana ho an'ny Ethernet na famantarana fibre optika ary peratra avo lenta elektrika. Ireo peratra slip ireo dia namboarina tamin'ny onitra fanerena, nasiana tombo-kase tamin'ny IP66 na IP68, trano vy tsy misy fangarony ho an'ny fanoherana ny harafesina sy ny rano ambanin'ny rano.
Ny rafitry ny serasera zanabolana dia afaka mamantatra, mahazo ary manara-maso ny famantarana satelita, ilaina amin'ny fifandraisana an-dranomasina manomboka amin'ny tanjona ka hatrany amin'ny toerana fanaraha-maso lavitra. Izy io dia misy singa telo manan-danja — tariby RF, mpampitohy RF ary antena.
Antenna no singa voalohany amin'ny rafitra fampidirana ao amin'ny rafitra fandraisana signal tsy misy tariby, satria ny rafitra antena dia ahafahan'ny fifandraisana an-dàlana eo anelanelan'ny tany sy ny toerana hafa mihetsika haingana, avy eo ny olona dia afaka manara-maso ny radara, ny fiaramanidina, ny fireharehana ary ny fivezivezena avy any amin'ny tobin'ny fanaraha-maso. Satria ny rafitra antena dia tsy maintsy atosika amin'ny fihodinan'ny 360 ° marindrano na mitsangana, noho izany dia mila peratra slip mba hampidirina ao amin'ny rafitra antena hamahana ny fanaraha-maso ny herinaratra sy ny signal avy amin'ny faritra mijanona iray mankany amin'ny faritra rotor. AOOD coaxial rotary joint and hybrid coaxial rotary joint and electrical slip ring dia azo omena.
Vokatra mifandraika: Rantsan-dranomasina